politika Fiarovana fiainan&#39;olona | Key-Components.com
1. Fampiasana votoaty tranonkala
Ny tranonkala dia manan-jo handika ny votoatin'ny tranokala sy ny votoatin'ny tranonkala ho an'ny fampiasana manokana anao fotsiny. Ny votoatiny misy ny zon'ny mpamorona sy ny fampahalalana momba ny fananana hafa dia tokony hajaina ianao ary ny rakitra dia azo tazonina. ny fanambarana marina, tsy midika hoe tsy manana zo ny tranokala, tsy midika hoe tsy mitaky zo ny tranokala, ary tokony hanaja ny fitsipiky ny finoana tsara sy ny tombontsoam-pananana ara-drariny ho an'ny fampiasana ara-dalàna ianao. manova, mandika, mampiseho, ampahafantarina na aparitaka am-pahibemaso ireo fitaovana ireo na raha tsy izany dia ampiasao ho an'ny tanjona ho an'ny daholobe na ara-barotra.Raranao ny fitaovana rehetra ho an'ny tranokala hafa na haino aman-jery hafa na haino aman-jery printy na informatika. Fiarovana ara-dalàna amin'ny alàlan'ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona, ny fampiasana tsy nahazoana alàlana dia mety hanana ny zon'ny mpamorona, ny marika ary ny zon'ny lalàna hafa. tapitra ho anao aingana ary tsy maintsy aringanao avy hatrany ny fitaovana azo alaina na vita pirinty.
Tranokala fampielezana fanavaozana
Ny fisian'ny votoatiny amin'ity tranonkala ity tsy misy endrika antoka.Tsy manome antoka ny maha-marina sy ny fahafenoana tanteraka.Site amin'ireo vokatra, teknolojia, programa, vidiny ary alokaly dia hiharan'ny fanovana tsy misy fampilazana. Key-Components.com.Ny fanoloran-tena hanavao azy ireo. Ny famoahana ny fampahalalana dia mety tsy ao amin'ny eo an-toerana tsy mbola afaka mahazo ny vokatra, ny dingana na ny serivisy, azonao atao ny mifandray amin'ny Key-Components.com fifandraisana sy mpandraharaha mpaninjara.
Ho fanampin'ny fepetra omena momba ny tsiambaratelo, ankoatr'izay dia mandefa na mandefa fitaovana any amin'ilay tranokala ianao, na fampahalalana momba ny fifandraisana ((eto aorian'ity farany ity ho fampahalalana) dia heverina ho tsy tsiambaratelo sy tsy fananana tombony. mandika lalàna, fitsipika ary fitondran-tena ho an'ny daholobe, tsy na avy amin'ny mailaka na mandefa izay tsy ara-dalàna, mandrahona, manala baraka, manala baraka, maneso, sary vetaveta na fitaoman-javatra tsy ara-dalàna hafa.Raha manana votoaty fampahalalana sy fitaomana ny olona dia misy porofon'ny fampitandremana na fanoherana ity tranokala ity. Aza misalasala mamafa ny hafatra na ny fampiatoana tsy misy fetra ny fampahalalana amin'ny Internet, tsy mila fahazoan-dàlana mialoha, tsy misy adidy hamoahana ny fanamarihana, lehibe ny toe-javatra, ity tranokala ity dia azo esorina amin'ny mpampiasa.
4.Mampiasa fifanakalozana votoaty
Key-Components.com Miaina mivantana mba hanara-maso na hijerena ny mpampiasa handefa na handefa hafatra na hifampiresaka mivantana amin'ny fampahalalana tsirairay amin'ny sehatra misy ny andraikitra, ao anatin'izany fa tsy voafetra ho an'ny chat room, Forum Key-Components.com na forum hafa mpampiasa. , sy ny fifanakalozana rehetra.Key-Components.com Ho an'ny votoatin'ny fifanakalozana toy izany dia tsy misy andraikitra, na inona na inona miteraka fanalam-baraka, tsiambaratelo, faharatsiana, na olana hafa.Key-Components.com Voatana rehefa hita hamafa ho raisina ho fanararaotanana, manala baraka, manjavozavo na raha tsy izany ny zavatra tsy mampaninona azy amin'ny fampahalalana.
5. tranokala handefasana rindrambaiko hampiasaina
Raha misintona rindrambaiko avy amin'ny fampiasana rindrambaiko hanarahana ny fifanarahana lisansa lozisialy hampidinana ireo fehezan-dalàna momba ny fahazoan-dàlana rindrambaiko ianao.Raha mamaky sy manaiky ny fifanarahana fahazoan-dàlana rindrambaiko ianao alohan'ny famoahana ireo fepetra dia tsy mahazo na mametraka ny rindrambaiko.
6.Mizara amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo
Ny rohy mankany amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo dia tsy hanam-pifandraisana fotsiny ihany.Raha ampiasainao ireo rohy ireo dia avelanao hivoaka ilay tranokala.Key-Components.com Tsy mbola nandinika tranonkala antoko fahatelo, tsy mifehy ireo tranokala ireo ary ireo atiny, tsy misy fepetra. .Raha manapa-kevitra ny hiditra amin'ny rohy mankany amin'ny tranonkala fahatelo ianao, ny mety ho vokatr'izany sy ny loza ateraky ny anao.
Key-Components.com Ary ny mpamatsy azy na ny antoko fahatelo voatonona dia tsy tompon'antoka amin'ny fahavoazana rehetra (ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny fatiantoka very, angon-drakitra very na fanelingelenana mpandraharaha ateraky ny fahasimbana), na fanararaotana mety izany, na tsy afaka mampiasa izany. Ny tranokala ary ny tranokala dia mifandray amin'ny tranokala rehetra na misy fampahalalana misy ao anatin'ireo tranonkala ireo, ary na inona na inona efa nisy ny fifanarahana, ny fampijaliana na ny anton-diany ara-dalàna mialoha ary mety ho fanimbana toy izany no mety hitranga amin'ny torohevitra. Raha mampiasa ity tranokala ity ianao. Vokatry ny fampahalalana na angon-drakitra ilaina amin'ny fikojakojana ny fitaovana, fanamboarana na fanitsiana, dia tokony ho fantatrao ny azy manokana dia tsy maintsy mizaka ny vidiny rehetra araky ny fahazoana azy.Key-Components.com Raha toa ka ireto toe-javatra ireto dia tsy misy andraikitra: ny fampitana vaovao amin'ny ny mpanome serivisy tambajotra (Key-Components.com.And ny olona nahazo alalana azy) ankoatry ny nanombohana; ny fampitana fampahalalana, ny fanaterana, ny fifandraisana ary ny fitahirizana dia omen'ny alàlan'ny fizotran'ny teknika mandeha ho azy. Safidin'ny mpamatsy serivisy tambajotra amin'ny tambajotram-pifandraisan-davitra; ankoatry ny fepetra hafa amin'ny famaliana automatique, ny mpanome tolotra tambajotra dia tsy misafidy ireo mpanome sy mpahazo ireo fampahalalana ireo; mpamatsy serivisy mpanome tolotra tambajotra na mpanelanelana tambajotra na fitahirizam-potoana mandritra ny fotoana mahazatra, fa tsy olona iray ankoatry ny mpahazo dia nahazo ny fotoana voatokana tsy mihoatra noho ny nomenao hanomezana alalana ny fampitana fampitana, fampitana lalana na amin'ny alàlan'ny fampifandraisana amin'ny fotoana mety; amin'ny alàlan'ny rafitra na ny fampitana ny votoatin'ny fampahalalana.
8. Fitsipiky ny toe-tsaina
Key-Components.com Enga anie hanova ireo teny ireo amin'ny fotoana rehetra. Tokony hitsidika ity pejy ity ianao mba hahatakarana ireo fehezanteny ankehitriny, satria mifamatotra anao ireo teny ireo. Azo antoka fa mety ao amin'ny pejy sasany ny fepetra voalazan'ireo fehezan-teny ireo amin'ny alàlan'ny fampilazana na teny voafaritra mazava. nosoloana.